▷ Black Friday amin'ny iPhone: fihenam-bidy tsara indrindra | Avy amin'ny mac aho
Ignatius Room | 26/11/2021 08:00 | Nohavaozina amin'ny 26/11/2021 08:45 | iPhone
Maro amintsika no mpampiasa miandry ny Black Friday mandroso miantsena Krismasy ary noho izany, mitahiry vola be ho antsika izay azontsika ampiasaina amin'ny zavatra ilaina hafa, toy ny fialam-boly, polvorones, nougats, liqueurs, mantecados, roscones de reyes, saribao ...
Zoma Mainty tsy manana daty voafaritra ao amin'ny kalandrie, tahaka ny Paska ihany. Ity andro manokana ho an'ny mpanjifa ity dia ankalazaina amin'ny Alakamisy farany amin'ny Novambra, ny ampitson'ny Thanksgiving, na dia nandritra ny andro teo aloha aza dia afaka mahita tolotra marobe hividianana iPhone isika.
1 Inona no modely iPhone azontsika vidiana amidy amin'ny Black Friday?
2 Nahoana no mendrika ny mividy iPhone amin'ny Black Friday?
3 Ohatrinona ny fihenan'ny iPhone matetika mandritra ny Black Friday?
4 Hafiriana ny Black Friday amin'ny iPhone
5 Aiza no hahitana tolotra iPhone amin'ny Black Friday
Inona no modely iPhone azontsika vidiana amidy amin'ny Black Friday?
Na dia tsy azo inoana aza izany, satria vao roa volana izao no teny an-tsenaRaha mikaroka tsara isika dia afaka mahita tolotra ho an'ny iPhone 13 Pro miaraka amin'ny karazana fihenam-bidy, saingy araka ny nolazaiko dia mila mijery be dia be ianao.
Miaraka amin'ny iPhone 13, ny telo ampahefatry ny mitovy amin'izany no mitranga ary aiza no tokony hataontsika misy iPhone 13 mini. Raha tsy mahita tolotra manokana izahay, raha te hamonjy vola ianao rehefa mividy ny iPhone 13 na iPhone 13 mini dia tsy maintsy miandry anay volana vitsivitsy ianao.
Apple iPhone 12 Pro vaovao ...
Miaraka amin'ny fandefasana ny iPhone 13 Pro, ny iPhone 12 Pro dia nampihena ny vidiny, noho izany dia azo inoana fa hahita izany amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny mahazatra.
Mendrika? Eny eny, raha tsy te hampiasa ny maody sinema sy ny endrika ProRes ianao Tsy misy afa-tsy amin'ny iPhone 13 Pro vaovao izy ireo.
Apple iPhone 12 vaovao ...
Safidy tsara ihany koa ny fividianana iPhone 12 na iPhone 12 mini, satria ho hitantsika tokoa mahaliana tolotra ity modely.
Raha tsy te handany vola be ianao, fa te hankafy ny ankamaroan'ny endri-javatra nampidirin'i Apple tamin'ny iPhones farany ianao, ny iPhone 11 ary ny Pro dia safidy tsara.
Ankoatr'izay, satria efa 2 taona mahery no nitety an-tsena dia ho tsotra be izany mahita tolotra miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana.
Nahoana no mendrika ny mividy iPhone amin'ny Black Friday?
Ny ankamaroan'ny orinasa teknolojia dia mifantoka amin'ny ankamaroan'ny varotra ataony, ary noho izany dia mahazo tombony, amin’ny telovolana farany amin’ny taona. Tsy amin'ny fiantsenana Krismasy ihany (rehefa miakatra ny vidiny), fa koa amin'ny tolotra ataony mandritra ny Black Friday.
Ity andro ity dia ampiasain'ny orinasa marobe mba esory ny tahiry ananany ary noho izany dia afaka mandray vokatra vaovao.
Raha te hividy iPhone amin'ny Black Friday ianao, tsy tokony ho diso fanantenana ianao, satria tsy hanana mitovy aminy intsony ianao mandra-pankalazan'ny Amazon ny Prime Day na mahita tolotra manokana ianao, saingy tokony ho fantatrao tsara.
Ohatrinona ny fihenan'ny iPhone matetika mandritra ny Black Friday?
Amin'ny Black Friday, araka ny nolazaiko tao amin'ny fizarana teo aloha, dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny taona hanavaozana ny fitaovana elektronika, satria ny orinasa dia maniry ny hanaisotra ny tahiry ananany ho an'ny tenany mba hamidy ireo vokatra efa lasa eny an-tsena na efa ho avy.
Raha jerena fa vao tonga eny an-tsena ny isan-karazany iPhone 13 dia tsy azo inoana fa hahita tolotra isika. Ary raha mahita izany isika, ny fihenam-bidy dia tsy mihoatra ny 5% amin'ny tranga tsara indrindra.
Aiza no ahafahantsika mahita fihenam-bidy tsara kokoa manerana ny faritra rehetra amin'ny iPhone 12, ny iPhone navoakan'i Apple tamin'ny taon-dasa ary nitsahatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivarotana. Ny modely rehetra izay ao anatin'ity sehatra ity dia ho afaka hahita fihenam-bidy eo anelanelan'ny 10 sy 15% raha be indrindra.
Ny iPhone 11 sy iPhone 11 Pro, ho hitantsika amin'ny vidiny tena mahaliana ihany koa izy ireo, miaraka amin'ny fihenam-bidy mety hahatratra 15%, satria i Apple dia manohy mivarotra ny iPhone 11 (fa tsy ny Pro) amin'ny alàlan'ny fantsona fizarana ofisialy.
Hafiriana ny Black Friday amin'ny iPhone
Amin'ity taona ity, ny Black Friday dia ankalazaina amin'ny 26 Novambra, zoma. Na izany aza, manomboka ny alatsinainy 22 novambra ka hatramin’ny alatsinainy 29 novambra manaraka, hahita tolotra tsy tapaka isika.
Eny, ny andro matanjaka indrindra dia ny faha-26. Raha mitady hanavao ny iPhone ianao na hividy iPhone voalohany, avy amin'ny Mac aho dia manoro hevitra anao izahay hanomboka. tsidiho ny tranokalan'ny Amazon, El Corte Inglés ary MediaMarkt manomboka amin'ny 0:01 maraina ny 26 Novambra ho isan'ireo voalohany nanararaotra ireo tolotra.
Aiza no hahitana tolotra iPhone amin'ny Black Friday
Apple dia tsy mbola naman'ny fanaovana fampiroboroboana na fihenam-bidy ary ny fankalazana ny Zoma Mainty dia tsy maningana. Ny hany lafiny tsara hitanay raha misafidy ny hividy iPhone mandritra ny Black Friday izahay dia ny ahafahantsika mamerina izany hatramin'ny 10 Janoary.
Amazon dia nanitatra ny vanim-potoana fiverenana ho an'ny vokatra novidina tamin'ity fankalazana ity hatramin'ny 31 Janoary, noho izany dia mety ho tombony ny fanoloran-tenan'i Apple hanitarana ny fotoana fiverenana. tonga tsinontsinona izany.
Nandritra ny roa taona, Apple mivarotra ny vokatra rehetra ao aminy ihany koa amin'ny alàlan'ny Amazon, ka ny fividianana vokatra Apple rehetra amin'ny Amazon dia mitovy amin'ny fiantohana.
Ny ankamaroan'ny fifanarahana ataon'ny MediaMarkt mandritra ny Black Friday dia mifandraika amin'ny faritra iPhone, noho izany dia pejy web tokony horaisintsika rehefa mitady tolotra raha te hividy iPhone vaovao isika.
Ny politikan'ny fiverenan'ny El Corte Inglés hatrany efa namela zavatra maro irina miaraka amin'ny vokatra Apple, satria rehefa nosokafana dia tsy mamela ny fiverenana.
Soa ihany fa tato anatin'ny taona vitsivitsy nanao ny politikany ho flexible kokoa, noho izany dia tokony ho diso fanantenana amin'ny tolotra amin'ny vokatra Apple rehetra izay hatolony mandritra ny Black Friday amin'ny alàlan'ny tranokalany sy ny tranokalany.
Raha alohan'ny hividianana iPhone na vokatra Apple hafa ianao dia te-hijery azy ara-batana, azonao atao ao amin'ny fivarotana K-Tuin, fivarotana azonay antsoina. Mini Apple Store, aiza ny vokatra rehetra eo am-pelatananay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPhone » Black Friday iPhone